Shipyard - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
Ngwe Pinlae’ Shipyard is situated on the other side of Hlaingriver, Kyeemyindaing Township, Yangon Region, and its area expands 36.715 acres. It offers shipyard service, spare parts, and maintenance for about 200 vessels every year.
ငွေပင်လယ်သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်ဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် လှိုင်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပြီးဧကအားဖြင့် ၃၆.၇၁၅ ဧက ကျယ်ပြန်ပါသည်။ ၎င်းမှ ရေယာဉ်များအာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီူ ရေယာဉ်နှင့် ဆက်စပ် အပိုပစ္စည်းများရောင်းချသည့်ဆိုင်ခန်းများ၊ ၊ ရေယာဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာမှ နှစ်စဉ်အားဖြင့် ရေယာဉ် အစီးရေ (၂၀၀)ကျော်ခန့် ပြုပြင်ခြင်းများ လုပ်ကိုင် ပေးလျက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။